Fa maninona Andong no renivohitry ny fizahan-tany Koreana fanahy sy kolontsaina?
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Fa maninona Andong no renivohitry ny fizahan-tany Koreana fanahy sy kolontsaina?
Ny tanànan'i Andong any amin'ny Repoblikan'i Korea dia tanàna misy fety, kolontsaina ary fizahan-tany. Ny ben'ny tanàna amin'ity tanàna ity dia Andriamatoa. Young-Sae Kweon. Izy no mpandray ny fihaonana an-tampon'ny virtoaly Aziatika Leadership tamin'ny herinandro lasa teo nataon'ny AMFORHT.
Andong dia tanàna any Korea atsimo ary renivohitry ny Faritanin'i Gyeongsang Avaratra. Io no tanàna lehibe indrindra any amin'ny faritra avaratry ny faritany misy mponina 167,821 hatramin'ny Oktobra 2010. Ny reniranon'i Nakdong dia mikoriana mamakivaky ny tanànan'i Andong izay ivon-tsena ho an'ireo faritra fambolena manodidina.
Fotoana iray ahafahan'ny mpitondra tanàna miresaka amin'ireo mpitondra ambony eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany ary hametraka ny hevitra hoe fandraisana andraikitra manerantany ary hampahafantatra ny maha-zava-dehibe ny tanàna kely ara-kolontsaina eran'izao tontolo izao.
Voadona mafy tamin'ny COVID-19, nilaza ny Ben'ny tanàna fa ity krizy ity dia fotoana mety ihany koa ho an'ny tanànany ary dingana lehibe ho an'ny ho avin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany ao Andong ity krizy ity.
I Andong dia manana cite World Heritage 5 ary mandray mpitsidika 1 tapitrisa isan-taona. Ny festival mask dia mahazo mpandray anjara avy amin'ny firenena 20. Ny vohitra Hahoe Folk angamba no tanàna malaza indrindra any Korea Atsimo. Ity tanàna ity dia tanànan'ny governemanta Koreana Tatsimo miaraka amin'i UNESCO ho toerana lova manerantany amin'ny 2010 miaraka amin'ny Yangdong Folk Village.
Andong koa dia trano fonenan'ireo fianaran'ny Confucianianina sy ny oniversite nandritra ny Fanjakan'i Joseon. Ny ohatra miavaka amin'ny seowon, na ny Akademia Confucian, dia i Dosan Seowon izay mampiditra an'i Yi Hwang, Byeongsan Seowon ho an'i Yu Seong-ryong, Imcheon Seowon ho an'i Kim Seong-il, Gosan Seowon, Hwacheon Seowon, ary ny hafa. Toerana fitsangatsanganana malaza hafa dia i Sisadan, Colony Artists Jirye, tempolin'i Bongjeongsa, ary Andong Icheondong Seokbulsang aka Jebiwon Stone Buddha.
Andong manana tohodrano Andong. Ao amin'ny faritra misy an'i Dam Dam, misy tsangambaton'ny Hetsika Andong Samil hanomezam-boninahitra ny Hetsika 1 Martsa. Ho fanampin'izay, misy ny valan-javaboary Wonmom sy valan-javaboary Unbu.
Nasongadin'ny Ben'ny tanàna fa Andong raha resaka harena ara-kolontsaina amin'ny tanàna kely no tanàna be solontena indrindra any Korea. Andong dia manana ny akora ilaina rehetra mba ho lasa ivon-toerana fizahan-tany ara-kolontsaina iraisam-pirenena. Ny olom-pirenenan'ity tanàna ity dia mahatsapa fa ny lanja lehibe indrindra dia ny fifandraisana amin'izao tontolo izao, ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, ary ny fanentanana.
Niaiky ireo fanamby mialoha ny Ben'ny tanàna miaraka amin'ny COVID-19, saingy nilaza ihany koa izy fa: "Nandresy ny gripa Espaniola isika taloha, ary handresy ity krizy ity ny zanak'olombelona ary hipoitra tsara kokoa noho izany." Miara-miasa amin'ny andrim-pianakaviana biolojika amin'ny fampandrosoana vaksinina ny tanàna.
Ny tanàna dia manangana karazana fizahan-tany vaovao izay ahafahan'ny fianakaviana miara-mankafy mandritra ny fijanonana misaraka, izay misy tanora maro kokoa mandeha miaina ny natiora.
“Ny fahasamihafana ara-kolontsaina no vokatra lehibe indrindra amin'ny fizahan-tany. Ny fizahantany dia afaka manamafy ny lanjan'izany amin'ny alàlan'ny fifanakalozana hevitra sy fifanakalozan-kevitra manerantany, "hoy ny ben'ny tanàna Kweon.
Andong dia neken'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, Dr. Taleb Rifai, rehefa niresaka momba ny zavatra niainany fony izy nitsidika ny vadiny. “Tsy andriko ny hitsidika azy indray,” hoy i Rifai.
Phenix Jet dia mandray ny fiaramanidina Bombardier Global 7500 voalohany